उच्च रत्त’चाप कम गर्न खानुहोस यी घरेलु खानेकुरा…पूरा पढी सेयर गर्नुहोस् ।
काठमाडौ : नसर्ने रो’गमध्येका एक प्रमुख रोग हो, रक्त’चाप । यसलाई अहिलेको आरामदायी जीवनशैलीको एक ख’राब उपजका रुपमा पनि लिइन्छ ।
पहिले पहिले प्राय वय’स्क उमेरका मानिसमा मात्र देखिने र’क्तचाप अहिले अन्य उमेर समुहका मानिसमा पनि देखिन थालेको छ । यो जो कोहीलाई सजिलै र कुनै पनि बेला लाग्न सक्छ । त्यसैले शरीरको र’क्तचाप थाहा पाउन नियमित रुपमा जाँच गराउनु पर्दछ ।
उच्च रक्त’चाप हुँदा हाम्रा ध’मनी र रक्त’नलीहरुमा बढी चाप पर्छ । त्यसलाई औ’षधी तथा खानपानको पर’हेजबाट समयमै नियन्त्र’ण गरिएन भने हाम्रो रक्तनली कम’जोर बनाइदिन्छ । अन्यथा मानिसको ज्यानै जा’न सक्छ । आज हामी उच्च रक्त’चापलाई नियन्त्र’ण गर्ने केही खानेकुराका बारेमा चर्चा गर्नेछौ :
केरामा प्रशस्त मात्रामा पाइने पो’टासियमले रक्त’चाप नि’यन्त्रण गर्दछ । पोटा’सियमले र’गतमा भएको अत्यधिक सोडि’यम पि’साबको माध्यमबाट शरीरबाट बाहिर नि’काल्न सहयोग गर्छ ।
चुकु’न्दरमा पर्याप्त मात्रामा पाइने ना’इट्रिक अक्सा’इडले र’क्तनलीहरुलाई खुल्न र र”क्तचापलाई कम गर्न सघाउँछ । तसर्थ यसको रस सेवन गरे उच्च रक्त’चाप निय’न्त्रण हुन्छ ।
३. हरियो सागपात
हरियो सागपातमा थुप्रै भिटामीन तथा खनि’जका साथै पर्याप्त पोटि’सियम पाइन्छ । त्यसैले उच्च रक्त’चापका रोगी’हरुले हरियो सागपातहरु बढी खाँदा फाइदा हुन्छ ।
दहीमा पाइने तत्वले रक्त’नली खुम्चन र फैलिन मदु’दत पु¥र्याउँछ । यस अलावा रक्तचा’पलाई निय’न्त्रित राख्दछ । दहीको नियमित सेवनले उच्च रक्त’चाप २० प्रतिशत कम हुन्छ ।
लसुनमा नाइ’ट्रिक अक्सा’इट पाइन्छ, जसले धमनी फैलिन सहयोग गर्छ । लसुनको नियमित सेवनले उच्चर’क्तचाप नियन्त्र’णमा आउँछ । लसुन बाहेक, तुलसी, दालचिनी, अलैंची, अदुवाले पनि उच्च रक्त’चापलाई कम गर्दछ ।
प्रे’सर लो भ’यो ? अपनाउनु’स् यी घरे’लु उ’पाय ! र’क्तचाप अचानक न्यून भएमा यसले श’रीरका विभिन्न अंगमा हानि पु¥र्‍याउन सक्छ। प्रे’सर लो भएको महसुस भएमा के गर्ने ? अपनाउनुस् यी उपायः नु’नपानी खाने: नुनमा सोडियम पाइन्छ, जसले ब्ल’ड प्रे’सर बढाउन मद्दत गर्छ। प्रे’सर लो भएमा एक ग्लास पानीमा डेढ चम्चा नुन हालेर पिउनुपर्छ।
कफी: ब्ल’ड प्रे’सर कम भएमा स्ट्रोङ कफी, हट चकलेट, कोकाकोला अथवा क्या’फिनयुक्त खाद्य पदार्थ खानाले प्रेसर सन्तुलनमा आउँछ। यदि सधैं प्रे’सर लो भइरहन्छ भने हरेक बिहान एक कप कफी खाने गर्नुपर्छ । तर, कफीसँगै केही खानेकुरा खान भुल्नु हुँदैन ।
किसमिस: प्रे’सर लो भएमा किसमिस खानु पनि लाभदायक हुन्छ । प्रे’सर लो भइरहन्छ भने राति केही किसमिस भिजाएर भोलिपल्ट बिहान भिजेको किसमिस र त्यसको पानी खाने गर्नुपर्छ। तुलसी: तुलसीमा भिटामिन-सी, पोटा’सियम, म्याग्ने’सियमजस्ता तत्व पाइन्छन्।
प्रेसर लो भएमा १०-१५ वटा तुलसीका पत्ता जुसमा हालेर त्यसमा एक चम्चा मह हाली पिउने गर्नुपर्छ। कागती पानी: कागती पानीले उच्च र न्यून र’क्तचाप दुवैमा लाभ गर्छ । प्रेसर लो भएमा कागती पानीमा अलिकति नुन र चिनी हालेर पिउनुपर्छ ।
अब नि’न्द्रा नला’गे, यस्ता घ’रेलु उपा’य अ’पनाउनुहोस् ! पुग्छ , त्यस्ता व्यक्तीको अनुहारमा समेत चमक आउने चि’कित्सकको भनाई छ । तर हरेक मानिसको जिवन सोचे जस्तो हुँदैन । चाहेर पनि मस्त निदाउन सक्दैनन् । लामो समय सम्म ओछ्यानमा पल्टिदानी निन्द्रा पर्दैन । यसरी लामो समय सम्म निन्द्रा नलागेमा हाम्रो शरीरको कि’ड्नी र मु’टुमा सोझै असर गर्छं ।
तनाव बढ्ने , टाउको दुख्ने डि’प्रेसनको समस्या आउछ । ब’ल्ड प्रेसर बढ्छ । मोटोपन बढ्छ । सु’गर बड्छ । जसको लागी हामीले दैनिक ८ घण्टा सुत्नुपर्छ । यदि निन्द्रा लाग्ने औषधी सेवन गर्नुहुन्छ भने त्यसले हाम्रो शरीरको कि’ड्रनीमा असर गर्छ । यस्तो समस्याबाट मुक्त पाउन यस्ता घरेलु विधि अपानाउन सकिन्छ । यसो गर्दा निनभए डाक्टरको सल्लाह पनि लिनुपर्छ ।
१. प्रसस्त समय घाम ताप्नुहोस् जसले थकान महसुस गराउछ र राती निन्द्रा लाग्दछ, साथै घामबाट प्रसस्त मात्रामा भिटामिन डि पाइन्छ । २. दैनिक व्यायम गर्ने , हिडडुल गर्ने । चाडै सुत्ने र चाडै उढ्ने बानी बसाल्ने । ३. बेलुका ४ बजे पछि चिया ,कफी एनर्जी ड्रिक तथा पिय पर्दाथ खान छोड्नुहोस् । यसमा प्रशस्त मात्रामा क्याफिन पाइन्छ ।
एक सय ग्राम कोफिनमा ४० मिलि ग्राम क्याफिन पाइन्छ । त्यसले निन्द्रा भगाउने काम गर्दछ । ४. खाना खाने वित्तिकै सुत्ने बानी छ भने यसलाई छोड्नुहोस् , जसले शरीरलाई नकारात्मक असर गर्दछ । खाना खाएको कम्तीमा २ घण्टा पछि सुत्ने वानी बसाल्नुहोस् ।
५. राती चाडै ओछ्यानमा जाने बानी बसाल्नुहोस् जसले निन्द्रा लाग्न मद्धत गर्छ । ६. सुत्ने समय एउटै बनाउनुहोस् । जसले गर्दा हाम्रो मष्तिस्कलाई सुत्ने र उढ्ने समय थाहा पाउछ । ७. बेलुकी सधैं मुख धुने , दाँत माज्ने बानी बसाल्ने , सुत्दा सधैं आफुलाई उपयोगी किताब पढ्ने बानी बसाल्ने । ८. आफु सुत्ने ओछ्रयान सधैं सफा चिटिक्क पारे राख्ने बानी बसाल्नुहोस् ।
९.सुत्ने बेलामा मष्तिस्कलाई कुनै पनि तनाव नदिने , सुत्ने बेलामा कहिल्यै मसलेदार खाना खानु हुँदैन । मसलेदार खानाले शरीरलाई हिट दिन्छ र पाचन तन्त्र पनि रात भरी सक्रिय गराइदिन्छ । १०.सुत्नु भन्दा १ घण्टा अगाडी दुधमा अलिकती जाइफलको धुलो हालेर खानुहोस् । यसको अलवा दालचिनीको धुलो राखेर दुधमा खादा नि गहिरो निन्द्रा लाग्दछ । २० ग्राम जाइफल प्रयोग गरियो भने यसले ३६ घण्टा सम्म निन्द्रा लाग्छ । पाचन किड््रनीको लागी राम्रो गर्छ ।
११. सुत्ने बेलामा केरा खाने गर्नुहोस् । केरामा पोटासियम , म्याग्नेसियम , भिटामिन बी ‘6’ पाइने गर्छ ।१२. पुदिनाको अचार, चिया खाने । १३.सेतो चना खाने , यसमा पोटासियम पाइन्छ ।१४.हरियो सागसब्जी खाने, चिल्लो रहित दही खाने । १५ सुत्ने बेलामा किबी फल, बदान ५-६ खाने ।
१६.मह खाने यसले मष्तिस्कमा रहेको सेरेटोनिकलाई सन्तुलनमा राख्न मद्धत गर्दछ । १७ सुने बेलामा सधै. शरीरलाई राम्ररी मालिस गर्नै बानि बसाल्नुहोस् । तर सबैलाई ८ घण्टा सुत्नुपर्छ भन्ने छैन ,कोही ५ घण्टा सुतेर नि स्र्फुत हुन सक्छन् । यदि कसैलाई डि’पे्रसन छ भने डाक्टरको सल्लाह बमोजिमको औषधि सेवन गर्नुपर्दछ ।
Previous नियमित कफी पिउँदा हुन्छ ? यति धेरै अचम्मैको फाइदा छन…हेर्नुहोस् । जानकारीको लागि सेयर गर्नुहोस् ।
Next कले’जोमा देखिएको सम’स्या कसरी थाहा पाउने ? यस्ता देखिन्छन् ल’क्षण…हेर्नुहोस् ।